တုံ့ပြန်မှုဒီဇိုင်းနှင့်မိုဘိုင်းပထမဦးစွာ - စီမံကိန်း, ပရိတ်သတ်နှင့်ရည်ရွယ်ချက်များ
သတိပေးချက်: ဗွီဒီယိုထဲမှာ default ဘာသာစကားစပိန်ဖြစ်ပါတယ်။ စာတန်းထိုးကစားသမားအတွက်သင့်ဘာသာစကားကို Select လုပ်ပါ
မိုဘိုင်းပထမဦးစွာနဲ့တုံ့ပြန်မှုဒီဇိုင်းပေါ်မှာဤသင်ခန်းစာမှာတော့ကျနော်တို့ကောင်းသောဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးကိုလုပ်နိုင်အောင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ website ကိုကိုင်တွယ်ဖြေရှင်းသည်အဘယ်သူကိုမှရည်ရွယ်ချက်များနှင့်အများပြည်သူ, စီမံကိန်းအတွက်သတ်မှတ်ဖို့ဘယ်လိုတစ်လက်တွေ့ကျတဲ့ဥပမာအားကြည့်ရှု
တုံ့ပြန်မှုဒီဇိုင်းနှင့်မိုဘိုင်းပထမဦးစွာ 01: စီမံကိန်း, ပရိတ်သတ်နှင့်ရည်ရွယ်ချက်များ
အပြီးအစီးသင်တန်းကို Download လုပ်
အသစ်သင်တန်းများကိုရှာဖွေ, subscribe ။ ကတိထားတော်, မရှိကိုစပမ်ရှိလိမ့်မည် :)
01 - စီမံကိန်း, ပရိတ်သတ်နှင့်ရည်ရွယ်ချက်များ
02 - အကြောင်းအရာ, အရင်းအမြစ်များနှင့်ရသုံးမှန်းခြေငွေစာရင်း
03 - အယူအဆ, အကြံပြုချက်များနှင့်ဗိသုကာပညာ
04 - Layout များ, UX နှင့် Mockup
05 - ဗွီဒီယိုစာမျက်နှာ၏ Mockup
06 - Mockup မိုဘိုင်းဗားရှင်း
07 - စာစီစာရိုက်, လိုဂို, အရောင်များ
08 - UX စမ်းသပ်
09 - web development
10 - မိုဘိုင်းပထမဦးစွာလုပ်လုပ်နည်း
11 - ပင်မစာမျက်နှာ
12 - သင်တန်းများ
13 - Image ကို width ကို 100 ရာခိုင်နှုန်းအမွဲ
14 - Cookies တွေကိုသတိပြုပါထည့်ပါ
15 - အရောင်များပစ္စည်းဒီဇိုင်း
16 - ဖောင့်ထည့်သွင်းဖို့ Google ကဖောင့်
17 - သတင်းရင်းမြစ် Icomoon Vector
18 - ဝဘ်၏ Visual ဒြပ်စင်
19 - တိကျတဲ့ဒြပ်စင်
20 - thematic သင်တန်းများ
21 - animation ရဲ့ Menu ကို
22 - Finder ကိုစာမျက်နှာ
23 - တုံ့ပြန်မှုဒီဇိုင်းလုပ်လုပ်နည်း
24 - ဝဘ်စာမျက်နှာ၏ HTML element တွေကို
25 - တုံ့ပြန်မှု Header ကို
26 - ဗီဒီယို Layout
27 - link တစ်ခုပေးခြင်းအားဖြင့်ကျယ်ပြန့်ပြဿနာ
28 - အပိုဒ်နှင့် Form ကို
29 - သင်တန်း Outline Layout အညွှန်းကိန်း
30 - ဒါကြောင့်တုံ့ပြန်မှုအဖြစ် YouTube Video ကိုထည့်သွင်းပါ
31 - တစ်တုံ့ပြန်မှုပုံစံကိုလုပ်လုပ်နည်း
32 - Facebook နှင့် Twitter ခလုတ်ပစ္စည်းဒီဇိုင်းအဖြစ်ထည့်ပါ
33 - ရှေ့တော်၌ load ရန်သင့် page အတွက် Tools များ
34 - စာမျက်နှာ၏ဝန်အချိန်တိုးတက်လာဖို့ကိုဘယ်လို
35 - SEO ဆိုသည်မှာဝဘ် marking
36 - အပြီးသတ်စမ်းသပ်
37 - သင့်ရဲ့ website မှာ Google Analytics မှထည့်သွင်းဖို့ကိုဘယ်လို
38 - ဆာဗာအဖြစ်သင့်စာမျက်နှာ upload
39 - စီမံကိနျး၏အဆုံး
'ငါ yuck ... ထပ်ငါ့ website လုပ်ဝံ့အဖြစ်ဖြစ်ခြင်းပါလိမ့်မယ်။ ငါသည်တုံ့ပြန်မှုဒီသင်တန်းအားငါတဖန်သမျှအတိုင်းပြုပါလိမ့်မယ်ကျေးဇူးတင်စကားပြောင်းလဲဘယ်တော့မှနိုင်ဘူး။ ဆုံးမဩဝါဒပေးခြင်းအတွက်ကျေးဇူးတင်ပါသည် !! '''
'ငါ '' သိပ်ဒါလုံးဝဝဘ်ထွက် တင်. မှကျွန်တော်တို့ကိုသင်ပေးသောလေးမြတ်'
'ငါ ... ကောင်းသောတစ်လုံးကိုအင်တာနက်နှင့်တူမည်သည့်သင်တန်းကိုမြင်ကြပြီမဟုတ် !! အံ့သြစရာ '''
အဆင့်မြင့်ဖို့သုညကနေ Web Design အပြီးအစီးသင်တန်းကို (45 နာရီ)
ဖွံ့ဖြိုးရေးသင်တန်းကို Android Apps နှင့်ဂိမ်းများ
အတ္ထုပ္ပတ္တိ: ကွဲပြားခြားနားသောဘာသာစကားများဖြင့် Analyst,-Programmer ။ CodigoFacilito အဖြစ်ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းကအသိအမှတ်ပြုထိန်း Premium ပလက်ဖောင်း။ အယ်ဒီတာ Cristalab ဆောင်းပါးတွေ။ အကြှနျုပျ၏ YouTube ကို Channel ကိုအ ANAYA နှင့် LaTostadora ထုတ်ဝေသူကကမကထပြုလျက်ရှိသည်။ ငါအသေးစိတ်မရှင်းပြခြင်းနှင့်သံသယများရှောင်ရှားခြင်းအဘို့အတော်တော်များများဥပမာပေးလို။
Android အတွက် Programming အားကစားပြိုင်ပွဲ အဆင့်မြင့်အန်းဒရွိုက် Android အတွက် App များ၏ဖွံ့ဖြိုးရေးပါတီ iOS အတွက် Programming အားကစားပြိုင်ပွဲ iOS အတွက် App များ Developing အန်းဒရွိုက်အတွက်မှီခို Injection
ဂျာဗားအခြေခံ C ++ တို့စစ်ရေးလေ့ကျင့်မှုဖြေရှင်းပြီး
SEO ဆိုသည်မှာအခြေခံ Haskell ဉာဏ်ရည်တု programming ဘာသာစကား encryption ဂျာဗား git နှင့် Github ဘာသာစကား (Golang) Programming ကို သွား.
အဆင့်မြင့်ဖို့သုညကနေ Web Design အပြီးအစီးသင်တန်းကို (45 နာရီ) ဖွံ့ဖြိုးရေးသင်တန်းကို Android Apps နှင့်ဂိမ်းများ
အားဖြင့်စပွန်ဆာ Channel ကို
jotajotavm © - တုံ့ပြန်မှုဒီဇိုင်းနှင့်မိုဘိုင်းပထမဦးစွာ